वीर अस्पतालले क्यान्सर उपचार गर्न ४७ करोडमा ल्याएको मेसिन प्रयोग नगरी तीन वर्ष घामपानीमा राख्दा बिग्रियो - Nepal Samaj
वीर अस्पतालले क्यान्सर उपचार गर्न ४७ करोडमा ल्याएको मेसिन प्रयोग नगरी तीन वर्ष घामपानीमा राख्दा बिग्रियो
६ चैत, २०७७नेपाल समाजअर्थ, मुख्य समाचार, स्वास्थ्य / शिक्षा
काठमाडौँ । विपन्न जनताको प्राथमिकतामा पर्ने वीर अस्पतालमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोथेरापी पाँच वर्षदेखि ठप्प छ, तर ४७ करोड खर्च गरेर ल्याइएको टोमोथेरापी मेसिन तीन वर्षसम्म जडान नगरी बिग्रिएको छ ।
तर मेसिन वीर अस्पतालमा ल्याएर जडान गर्नुको सट्टा सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुको चौरमा राखिएको थियो । तीन वर्षसम्म चौरमै रहेको मेसिन घामपानीबीच खिया लागेको बिग्रिएको छ ।
अस्पतालका निवर्तमान निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरी पनि चौरमा थन्किएको ‘टोमोथेरापी’ मेसिनमा समस्या आएको स्विकार्छन् । उनको दुईवर्षे कार्यकाल गत आइतबार मात्रै सकिएको छ । तीन वर्षसम्म अस्पतालले मेसिन चलाउन सार्थक प्रयास गरेन । केही दिनअघि मात्र वीरले मेसिनको अवस्था बुझ्न प्राविधिक टोली पठाएको थियो । टोलीले कन्टेनरभित्र पानी छिरेकाले मेसिनमा खराबी आएको प्रतिवेदन दिएको छ ।
‘जर्मन प्राविधिक टिमले बलम्बुमा गएर टोमोथेरापी मेसिनको अवलोकन गरेको छ । तीन वर्षसम्म हिउँद–बर्खामा मेसिन बाहिरै थियो, पानी चुहिएकाले केही खराबी आएको छ,’ डा. सेन्चुरीले भने, ‘मेसिनको क्षमतामा समस्या आएकाले मर्मत गरेर मात्रै वीरमा ल्याउने तयारी भएको छ ।’ तर बिग्रिएको मेसिन बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो त अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’
वीरमा कोभिडको समयमा संक्रमितको उपचारका लागि अति महत्त्वपूर्ण मानिने आठवटा भेन्टिलेटर बिग्रिएका छन् । भूकम्पको समयमा निर्माण गरेको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको महिनौँ भइसकेको छ । अस्पतालमा दैनिक ८० देखि ९० वटा सिलिन्डर खपत हुन्छन् । प्लान्ट बनाए दैनिक एक सय ३० सिलिन्डर भरिन्छ, तर मर्मत गर्न छाडेर प्रतिसिलिन्डर १५ सयमा खरिद गरिने गरेको छ । शल्यक्रिया गर्नुपूर्व वा गरिसकेपछि सामान उमाल्न प्रयोग गरिने अटोक्लेभ मेसिन पनि बिग्रिएको छ । यसलाई बनाउन दुई लाख खर्च लाग्छ, तर नयाँ खरिद गर्दा १८ लाख रुपैयाँ पर्छ । भएका बेड थुपारिएको छ, तर ६० वटाभन्दा बढी बेड १० हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको कर्मचारी बताउँछन् । छातीको बाहेक सबै एक्सरे गर्ने अटोक्लेभ मेसिन बिग्रिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।
स्तन क्यान्सर जाँच गर्ने मेमोग्राम मेसिन कामै नलाग्ने भएको छ । अस्पतालका उच्च अधिकारीका अनुसार यो उपकरण बनाउन १० लाख खर्च हुन्छ । मर्मत गर्न छाडेर अस्पतालले एक करोड ५० लाखमा नयाँ किन्ने तयारी गरेको छ । सामान्य एक्सरेले देख्न नसक्ने ९फिस्टुला हेर्न प्रयोग गरिने० स्पेसल एक्सरे पनि बिग्रिएको छ । नयाँ किन्दा स्पेसल एक्सरेको मूल्य एक करोडभन्दा बढी पर्न जान्छ । जब कि करिब १० लाखमा मेसिन मर्मत गर्न सकिने कर्मचारीहरू बताउँछन् । दुई वर्षदेखि सिटिस्क्यान मेसिन थन्किएर बसेको छ । अस्पतालका विज्ञ चिकित्सकका अनुसार २० लाख खर्च गर्दा यो मेसिन चलाउन सकिन्छ । खरिद गरेर प्रयोगमा समेत राम्रोसँग नल्याएको यो अत्याधुनिक सिटिस्क्यान मेसिनमा अन्य सामान थुपारेर गोदाम बनाइएको छ । यसको मूल्य दुई करोडभन्दा बढी छ । ब्लड बैंकका फ्रिजसमेत बिग्रिएका छन् । सातदेखि आठ हजार रुपैयाँमा बन्ने यी फ्रिज नयाँ किन्दा एक लाख रुपैयाँ पर्छ ।
दुईवटा सि–आम मेसिन पनि थन्क्याइएका छन् । यो मेसिनको सहायताले शरीरको भित्री भाग हेरेर अप्रेसन गर्न प्रयोग गरिन्छ । २० लाख खर्च गरे मेसिन बनाउन सकिन्छ, तर अस्पताल प्रशासनले चासो देखाएको छैन । नयाँ मेसिनको मूल्य भने दुई करोड पर्छ । इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रिएको तीन हप्ताभन्दा बढी भइसकेको छ । इन्ट्रा अप्रेटिभ सिटिस्क्यान मेसिन राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा थन्किएर बसेको छ । बिरामी अन्त पठाइन्छ, तर मर्मत गरेर चलाउने सोच नेतृत्वमा देखिएन । यो उपकरण २० करोड मूल्यको हो । ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा। सन्तोष पौडेल केही उपकरण बिग्रिएको स्वीकार गर्छन् । निकै महŒवपूर्ण मानिएको इन्ट्रा अप्रेटिभ सिटिस्क्यान मेसिन दुई दिनअगाडि मर्मत गरे पनि पुनः बिग्रिएको पौडेलले बताएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।